Raw Nandrolone vovoka laurate vovoka mpanamboatra & mpamatsy - Factory
Ny Nandrolone laurée (BAN) (anarana marika Clinibolin, Fortadex, Laurabolin), na ny poezia dodecanoate nandrendrone, fantatra koa amin'ny 19-nortestosterone 17β-laurate, dia ny steroid androgen sy steroid anabolic ary ny nandrolone ester. Amin'ny maha-nandrobona azy, dia mitondra fiantraikany amin'ny herin'ny anabolika io fanafody io.
Rano Nandrolone Laurate vovoka (26490-31-3) video
Rano Nandrolone lavarangana vovoka Description
Nandrolone Laureate no anarana nomerika ny mofomamy mafilotra ao Laurabolin.nandrolone laureate dia steroido vétérinaire izay ahitana ny vovoka Raw Nandrolone Laurate vovoka. Laurabolin dia efa ela dia Deca Durabolin (nandrolone decanoate), mijanona ho mavitrika mandritra ny iray volana eo amin'ny vatana. Raha manana olana ianao amin'ny fikarakarana ny famokarana testosterone voajanahary taorian'ny fampiasana Deca, dia hanana olana amin'ny fampiasana Laurabolin ianao.
Ny atleta amin'ny ankapobeny anefa dia mampiditra izany fanafody izany mandritra ny herinandro. Ny fandrosoana, Laurabolin dia hampiseho fihenam-bidy mitovitovy amin'ny fihenan-tsakafon'ny tsiranoka androgenic kokoa.
Laurabolin dia manana hetsika anabolika matanjaka miaraka amin'ny toetra androgenic minitra ary natao manokana hampiroboroboana ny protein synthesis raha tsy misy ny famokarana vokatry ny tsy fahampiana. Ity proteinina sela proteinina ity dia mamela ny fisorohana ny fatiantoka proteinina amin'ny alàlan'ny urea ary mampiroborobo ny fatran'ny tsiranoka. Ny biby dia nampiasaina mba hanitsiana ny tsy fahampian-tsakafo, ny tsy fahampian-tsakafo, ny tsy fahampian-tsakafo ary ny tsy fahampian-tsakafo.
Rano Nandrolone lavarangana vovoka Specifications
Product Name Rano Nandrolone lavarangana vovoka
Anarana simika Rano Nandrolone lavarangana; 26490-31-3; Nandrolone dodecanoate; UNII-WVJ22FFN83
molekiolan'ny Formula C30H48O3
molekiolan'ny Wvalo 456.711 g / mol
mitsonika Point 44-46 ℃
Boiling Point 559.78 ° C amin'ny 760 mmHg
Color Vovoka fotsy na fotsy fotsy
Application Ny vovon-tsolola Nandrolone Laurate dia anarana simika ao amin'ny Laurabolin. Ny fitaovam-pandaminana ara-panafody, ny fihenan'ny tsindrona hozatra. Amin'ny maha-hormonina lahy sy hormones anabolika. Ny Nandrolone Nandrolone Laurate dia manana hetsika mibaribary matanjaka sy manana endri-pahasalamana kely ary natao manokana mba hampiroboroboana ny protein synthesis raha tsy miteraka vokatra tsy mitongilana.
Inona ny Rohan Nandrolone Laurate (26490-31-3)?
Ny volo voapetaka lumine dia endrika iray amin'ny endrika anabolic steroide. Ny ety tsy maotina napetraka eto dia atômôma roa lava kokoa noho ny decanoate, ka noho izany, ity mpitsabo ity dia mametraka fitsaboana iray maharitra maharitra mandritra ny fotoana maharitra noho ny Deca-Durabolin. Noho ny fananana ny fananana hafanana mafon-ketaheta dia azo atao ny manantona vovo-dronono lolo iray isaky ny telo ka hatramin'ny efatra herinandro eo amin'ny toeram-pitsaboana iray. Noho ny fandrobon-toetran-tsokosoko, dia mitondra fiantraikany amin'ny anabolisy mahery vaika io fanafody io, izay miaraka amin'ny toetra ambany sy ny androgenic ambany. Na dia tsy ampiasaina betsaka aza ny fampiasana azy, dia ny atleta sy ny bakteria nandrobona no nandrosoan'ny volo-bozaka lava noho ny fahaizany mampiroborobo tsikelikely ny fihenan-tsakafo tsy dia misy vokany be loatra.
Ahoana ny fomba famonoana menamena lava hoditra (26490-31-3) asa
Ny poetin'ny lauratif dia natokana ho an'ny nandrolone, izay nampidirina ao amin'ny vondrona hydroxyl 17-aster (asidrain'ny laurika) ny asidra carbonyl. Ny steroids esterified dia latsa-po kokoa noho ny steroids maimaim-poana, ary mihamitombo tsimoramora kokoa avy amin'ny faritra famoahana. Indray mandeha ao amin'ny renirano, dia esorina ny ester mba hanomezany (nandrisika) gratis nandrolone. Ny steroide esterified dia natao mba hampandrosoana ny varavarankelin'ny vokatra ara-pahasalamana manaraka ny fitantanana, izay mamela ny fandaharam-potoana fampidirana matetika raha oharina amin'ny injections amin'ny steroid steroid. Nandrolone laurée dia natao mba hanomezana fanafahana ny nandrolone hatramin'ny 3 hatramin'ny herinandro 4 taorian'ny fanindroany.
Rano Nandrolone lava volo (26490-31-3) Dosage
Ho an'ny lehilahy: Ny poitr'ilay laurée nandrolone dia tsy ankatoavina ho an'ny olona. Tsy misy fepetra ny toro-lalana. Raha ampiasaina ho tanjona ara-batana na fampivoarana ny fampiharana, ny doka 200-400 mg nomena ny 7-10 andro isaky ny andro 8-12, nalaina tao amin'ny cycles 450 hatramin'ny herinandro naharitra 600. Ity sehatra ity dia ampy ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa mba hahatsikaritra ny mason-tsakafo amin'ny tanjaky ny tanjaky ny hery sy ny tanjaka, izay tokony hiara-dia amin'ny hetsika ambany etrogenika sy androgenic. Ny dosie avo indrindra (7-10 mg isaky ny XNUMX-XNUMX andro) dia hanome fiantraikana mahery vaika, saingy mety ho sarotra raha oharina amin'ny fihenan'ny tsimok'aretina ity steroid ity. Mifidy kosa anefa ny maro mba hampifandraisana an'io mpikaroka io miaraka amin'ny steroide anabolic / androgenic . Raha jerena ny toetra maha-izy azy, dia toa tsara ho an'ny teboka roa sy ny tanjona izany, ary mety hanolo ny Deca-Durabolin amin'ny faratampony.
Ho an'ny vehivavy: Ny poitr'ilay laurée nandrolone dia tsy ankatoavina ho an'ny olona. Tsy misy fepetra ny toro-lalana. Raha ampiasaina amin'ny tanjona ara-nofo na fampivoarana ny fampiharana, ny dosage amin'ny 100 mg isaky ny andro 10-14 dia nalaina ho an'ny 4 hatramin'ny herinandro 6. Na dia kely fotsiny aza ny androgenic, dia indraindray ny vehivavy dia mifanandrify amin'ny soritr'aretina virilization rehefa mandray io vondrona io. Raha manahy ny viriosy ny vokatra hafa, dia tokony hajanona avy hatrany ny zava-mahadomelina mba hisorohana ny fisehoany maharitra.
Rano Nandrolone lava volo (26490-31-3) soa
Nandrolone laurée dia misy hetsika mibaribary matanjaka miaraka amin'ny toetra androgenic kely ary natao manokana mba hampiroboroboana ny protein synthesis raha tsy misy famokarana vokatry ny tsy fahampiana. Ity proteinina simika ity dia mamela ny fisorohana ny fatiantoka proteinina amin'ny alàlan'ny urea ary mampiroborobo ny fatran'ny tavy. Ny biby dia nampiasaina mba hanitsiana ny tsy fahampian-tsakafo, ny tsy fahampian-tsakafo, ny tsy fahampian-tsakafo ary ny fahanterana. Ny ankapobeny dia manapoka izany rongony isan-kerinandro. Ny fanonganam-pandehan'ny Nandrolone dia ny lanjan'ny anabolika izay misy fiantraikany bebe kokoa amin'ny androgenic.
Buy Buy Nandrolone laurate powder from Buyaas.com